Flickr Uploadr Na-azọpụta !bọchị! | Martech Zone
Flickr Uploadr Na-azọpụta !bọchị!
Sunday, June 3, 2007 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Adị m onye dị obi umeala ọrụ Flickr ma n'ezie emebeghị ọtụtụ ihe na ya. Isi ihe mere eji eji Flickr bụ njirimara otu nyere m ohere ịme I Họrọ Indy Group maka weebụsaịtị Ahọrọ M Indy. Iningbanye n'òtù dị iche iche bụ isi ihe na saịtị ntanetị ọ bụla ma ha niile yiri ka ha na-ejide ma na-enye ha.
My nwa gụsịrị akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ sekọndrị otu izu gara aga (ya na 3.81 GPA a na-akwanyere ùgwù, obere agụmakwụkwọ, wee nabata mmemme physics na IUPUI). Achọrọ m foto dị ole na ole na ngụsị akwụkwọ ahụ, zipụ ha ma zigara ndị ikwu anyị niile. Ozugbo, amalitere m inwe nsogbu… ụfọdụ ndị folks nwetara faịlụ ahụ enweghị ike imeghe ya, maka ụfọdụ ọ merụrụ ahụ, ụfọdụ anabatabeghị ya ma ọlị.
N'ụtụtụ a, ekpebiri m ịbugo ihe oyiyi na Flickr ma soro ezinụlọ m kerịta set ahụ. M n'ezie na-atụ ụjọ usoro, ezie… bulite, dezie, bulite, dezie, bulite, dezie. Tupu m malitere, m gara Akụkụ ngwaọrụ nke Flickr ịhụ ihe nwere ike ịgbanwe na achọtara m Flickr Uploadr:
Ọ na-arụ ọrụ oke itunanya! Naanị ihe m mere bụ na egosighi ihe eserese na ngwa ọrụ yana nghazi ziri ezi (etinyere ha na ntụzi ziri ezi) Ozugbo ebudatara ihe oyiyi ahụ, emere m otu ihe, ma soro ndị ezinụlọ m na ndị enyi m kerịta ya (ịnwere ike izipu ndị enyi na ndị ezinụlọ 50 otu ọgụ)!
Mara mma jụụ. Daalụ, Flickr! Enwere m olileanya ịhụ ụzọ ndị ọzọ m ga-esi gosipụta onyonyo n'ọdịniihu. O meela ọnwa ole na ole kemgbe m banyere na Flickr ọ pụtaghị na enwere ngwaọrụ ndị ọzọ maka ị na-egosipụta ihe onyonyo gị na sidebar, file flash, slideshow, wdg
View Foto Ndị Gụsịrị Akwụkwọ na Bill
The Top 10 Spamming ISPs nwere ike iju gị anya
Jun 3, 2007 na 12: 22 PM
Enweela m ịkwaga ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị enyi m niile ka ha jiri Flickr mee ihe dịka onye ọ bụla na-eji ya na-ahụ interface dị mfe iji. Ulo m ji ya megharia na Macbook na iPhoto m, n’agbanyeghi na enwere ihe nkpachapu nke Flickr n’enye n’efu o tinyeghi onu na iPhoto. Ihe dị ka $ 10 (echere m) azụrụ m 'FlickrExport' nke na-agbakwunye ozugbo na iPhoto ma na-eme ka ebugote + mkpado na oke doddle.
Iji mee ka m jiri ihe dịka Flickr ọ ga-adị mfe ma ọ bụghị na anaghị m echegbu onwe m, ebe ọ bụ na aghaghị m ịgafe usoro dum nke ịkwanye na igwefoto m ma mee ka ọ bugharịa foto ahụ.
Nnukwu mkpughe bụ Nokia N95 m. A otutu nke gbaa na m blog ugbu a iwere na ya 5MP bụ ọtụtụ na ọ bụ ezie na ọ doesnt tụnyere a kwesịrị ekwesị igwefoto ọ dị mma maka blog foto.
Yabụ mgbe ahụ anyị bịara Zooomr, dị ka ndị ọzọ doro m anya na ọtụtụ ndị ọzọ anyị niile na-eche ịhụ ka ihe a si gwụ. M jisiri ike banye n'ụtụtụ a mana achọtara na-ebugote onyogho na-egbu mgbu na oke, m ga-ahụ n'anya nke ukwuu ịre ụfọdụ n'ime agba m ka mma, mana nhụjuanya / ihe ụtọ abụghị nnukwu ugbu a.
Jun 3, 2007 na 12: 30 PM
Adị m onye mbụ kuchiri nke Flickr na ya n'aka ka toro na n'oge gara aga afọ ole na ole… na-eche na ọ ga-abụ akụkụ nke a video egwuregwu interface na ugbu a ọ bụ foto ngwọta.
A ezigbo enyi m na-arụ ọrụ na WordPress foto gallery ngwa mgbakwunye ihe ngwọta nke na-ewe nke kachasị mma nke ọtụtụ foto mmemme, dị ka Flickr mana na-eme ka ọ bụrụ na ese foto gị niile, ngosi, wdg na-achịkwa kpamkpam site na WordPress wụnye. Enweghị mkpa ịzaghachi na ihe ndị ọzọ nke 3.
Anyị nwere ihe akaebe na-arụ ọrụ nke echiche na ụbọchị ole na ole sochirinụ ọ ga-adị njikere maka ntọhapụ 1.0.
Aga m ejide n'aka na izipu ya n'ụzọ gị ka ị nwee ike ịkụ ya 🙂
Ekelere Bill maka ịgafe ụlọ akwụkwọ sekọndrị yana onye na-ere ahịa GPA.
Otu ihe na - efu na foto gi bu nke gi na nwa gi… kedu nke na-eme? hehe… Ka anyị hụ papa mpako 🙂
Jun 3, 2007 na 1: 26 PM
Na-atụ anya ịhụ nke ahụ, Sean. M ike ikwere na ị Agbaghara nnukwu 'ol foto m na nwa m nwoke na nwa m nwanyị - ọ dị ebe ahụ!
Jun 3, 2007 na 1: 32 PM
O yikarịrị ka m ga-enwe ihe akaebe nke echiche na saịtị m ma emechaa taa, m ga-ezitere gị email.
Chaị. Olee otú m si chefuo foto ahụ gị na nke ezinụlọ gị? Lelee gị, niile dị mpako na ihe.
Jun 4, 2007 na 7:32 AM
Heartiest Ekele nye Bill na gị.
Ị nwara http://beta.zooomr.com/?
Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ibudata foto gị niile site na flickr, debe ya ->
Daalụ Doug maka enyemaka gị na ihe niile dị na wordpress 🙂 I wepụrụ m ofe ụbọchị nke ọzọ 🙂